Octagonal Glass Treehouse eBerkshires - I-Airbnb
Octagonal Glass Treehouse eBerkshires
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKatherine
Le octagonal Massachusetts indlu yeglasi yomthi yamkela iindwendwe kunye nengaphakathi layo eliyilwe ngokukodwa kodwa elingacwangciswanga. Ungazonwabela ujikeleze indawo yokubasa iinkuni, kwaye ujonge umgangatho ukuya kwiifestile zesilingi kwi-7 yeehektare ezijikelezileyo zabucala.
Yiza eBerkshires, kwaye uhlale kwi-chic octagonal treehouse. Yonwabela iimbono ezingathintelwanga ngelixa ujikelezwe ngumgangatho ukuya kwiifestile zesilingi kwindawo yabucala epheleleyo. Kukho idesika enkulu ngasemva enegrill kunye nesidlo sangaphandle kunye nezihlalo.
Indawo yokutshisa iinkuni yanamhlanje yeyona ndawo iphambili yegumbi lokuhlala, ejikelezwe ziifestile ezinkulu ezibonelela iindwendwe ngemibono emangalisayo yemithi ejikeleze indlu yomthi. Kukho ibhedi ephindwe kabini kwindawo yokuhlala, kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo.
Igumbi lokulala le-Master linebhedi enkulu, ukufikelela kwidesika, kunye negumbi lokuhlambela labucala.
Indawo yokutyela ngaphandle kwekhitshi ibandakanya ngokufanayo kwaye ngokulinganayo njengemibono enomtsalane yendawo ejikelezileyo, njengoko iifestile ezinkulu ziyinto ephambili kule ndlu yomthi wodidi. Ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo livumela iindwendwe ukuba ziziphekele zonke izidlo zazo, ukuba zikhetha njalo, kwaye ziquka ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, kunye nezixhobo.
Iilinen kunye neetawuli zinikezelwa.
I-Wi-Fi (DSL) kunye nolwamkelo lweSelfowuni kuyo yonke indawo yokuhlala.
IGreater Barrington, idolophu yaseNew England enomtsalane, ikumgama wemizuzu engama-20 ngemoto.
I-Tanglewood, iJacobs Pillow, kunye nekhaya lika-Edith Wharton zikufutshane.
Kufuphi neendawo ezi-3 zokutyibiliza kunye nokuhamba kakuhle.
Ukuhlala ubusuku bempelaveki, kukho ukonyuka kwe-50 yeedola ngosuku.
4.94 · Izimvo eziyi-219
Gqibezela indawo yokuhlala kwipropathi kodwa umgama omfutshane wehla induli ukuya kwidolophu yaseOtis.
Umbuki zindwendwe ngu- Katherine
Akukho mntu, kodwa iyafumaneka kwimibuzo ngefowuni okanye ngeapp.
Ukhathalelo lwengca kunye nenkonzo yokususa ikhephu ngamaxesha athile kwizakhiwo ngeenjongo zokugcina nokhuseleko.